Real Madrid oo garoonkeeda Alfredo Di Stefano guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Liverpool… SAWIRRO – Gool FM
Real Madrid oo garoonkeeda Alfredo Di Stefano guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Liverpool… SAWIRRO
Dajiye April 6, 2021
(Madrid) 06 Abril 2021. Real Madrid ayaa garoonkeeda Alfredo Di Stefano guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Liverpool, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-1 kulankii lugta hore wareega siddeed dhamaadka ee tartanka UEFA Champions League.
Daqiiqadii 27-aad kooxda Real Madrid ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 1-0 ka dhigay xiddigooda reer Brazil ee Vinicius Junior, kaddib markii uu caawin cajiib ah ka helay saaxiibkiis Toni Kroos.
36 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay Marco Asensio ayaa wuxuu ciyaarta ka dhigay 2-0 ay ku hoggaamineysay kooxda cad cadka ah ee Real Madrid.
Daqiiqadii 51-aad kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa la timid gool, waxaana 2-1 ka dhigay xiddigooda reer Massar ee Mohamed Salah.
65 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Vinicius Junior oo caawin ay kaga timid saaxiibkiis Luka Modric ayaa hoggaanka u sii dheereeyay kooxdiisa Real Madrid wuxuuna ciyaarta ka dhigay 3-1.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku dhamaatay 3-1 ay kaga adkaatay Real Madrid kooxda Liverpool oo marti ugu aheyd garoonka Alfredo Di Stefano, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulammada lugta hore wareega siddeed dhamaadka ee tartanka UEFA Champions League.
UCL: Manchester City oo guul ka gaartay Borussia Dortmund oo marti ugu aheyd garoonka Etihad… +SAWIRRO
Horudhac: Bayern Munich vs Paris Saint-Germain... (PSG oo doonaysa inay caawa ka aar-gudato Bayern oo ku garaacay Final-kii UEFA Champions League ee 2019-20)